अमेरिका पढ्न गएका २३ वर्षीय प्रमोद, कहिले नफर्कने गरी विदेशमै अस्ताए – Dainiki Online
अमेरिका पढ्न गएका २३ वर्षीय प्रमोद, कहिले नफर्कने गरी विदेशमै अस्ताए
February 28, 2021 February 28, 2021 adminLeaveaComment on अमेरिका पढ्न गएका २३ वर्षीय प्रमोद, कहिले नफर्कने गरी विदेशमै अस्ताए
अमेरिकामा एक नेपाली विद्यार्थी’को नि’धन भए’को छ। टेक्सास राज्यको ह्युष्टन शहरमा बस्दै आएका २३ वर्षीय झापाका प्रमोद भट्टराई’को अ’साम’यिक नि’धन भए’को हो।
उनी आफ्नै कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृ’त फे’ला प’रेका हुन। पो’ष्टमा’र्टम रि&पोर्ट अ’झैसम्म प्राप्त भइ नसकेको कारण उ’नको मृ’त्यु&को का’रण थाहा हुन सकेको छैन। पढाईको लागि पांच वर्ष अगाडि उनी अमेरिका गएका थिए।
ह्युष्टनमा हिमपातको कारण बत्ती गएको बेला प्रमोद र उनीसंगै बस्ने साथीहरुले सोमबार राति बाहिर वार्वीक्यु पार्टी गरेका थिए र सुत्न गएका थिए । मंगलवार विहान संगै वस्ने साथीले उन’लाई मृ’त अ’वस्थामा को’ठामा फे’ला पारे’का थि’ए।
झापाको वुधवारे घर भएका प्रमोद कम्प्युट साइन्सको विद्यार्थी थिए र अध्ययनसंगै काम पनि गरिरहेका थिए। उनको श’व’लाई नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ।श’व’लाई नेपाल पठाउन आवश्यक पर्ने करिब १५ हजार डलर संकलन गरिएपछि शवलाई नेपाल पठाउने पक्रिया अगाडी बढाइएको छ।
जाग्यो ओलि सरकार ! सारा देशबासिहरुलाइ दियो अत्यन्तै खुसिको खबर !
अन्तत प्रचण्डले खोले आफ्नै पोल:कांग्रेस, जसपा र हामी मिल्दा भारतका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ
चक्लेट अड्किएपछि शिशुलाई मेडिसिटी अस्पातल ल्याइदै
हे भगवान् ! ७ महिनाको यी बाबुलाई के भयो यस्तो ,अनुहार पुरै डढेको छ ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )
तीन तले अन्डरग्राउण्ड पार्किङ सहितको हामी नेपाली को सान धरहरा लाई अवश्य लाईक गर्दिनुहोला।